BCB training programs
Business Management Module (I)
Business Management Module (II)
Business Management Module (III)
Essential Skills For Business Professional
Effective Communication Skills & Presentation Skills
Doing Business In Line with The Law Of Myanmar
Register in our website.
- Financial Accounting (3months )
-	SME Development (3months )
-	Micro Finance I ( 1.5 month )
- Financial Management (3 months)
-	SME Management (3 months)
-	Micro Finance II (3 months)
Career Enhancement Program (Basic Course)
Duration :3months (66 hours)
- Concept Of Micro Finance Procedure
-	Micro Finance Law
-	MF Institution formation and set up
- Management at Supervision
- Data Entry and Record Procedure
Duration : One & half months (33hours)
Career Enhancement Program (Advanced Course)
- Myanmar Business Environment
-	Business Appraisal Methods
- Advanced Office Management
-	Accounting for SMEs
- Planning for SMEs
Duration :3months (66hours)
Micro Finance II
- Basic Principles Of Micro Finance
-	Communication Skills Development
-	Risk Management, Loan Recovery & Delinquency
- Microfinance Product Development
- Leadership in Institution
- Decision Making, Problem Solving
Date : Saturday & Sunday
Time : 2:00 PM ~ 5:00 PM
Time : 5:00 PM ~ 8:00 PM
မိမိ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို နည်းစနစ်ကျသော စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းများဖြင့် အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်လို ပါသလား။ ထူးချွန် ထက်မြက်သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ဖြစ်လိုပါသလား။ မိမိနှင့် မိမိအဖွဲ့အစည်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့် မြင့်မားတိုးတက်လာအောင် မြှင့်တင်နိုင်စေရန် နှင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် လက်တွေ့အသုံးချနိုင်စေရန် နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံရှိသော လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွင် အောင်မြင်နေသည့် MBA ဘွဲ့ရ ဆရာ၊ ဆရာမများမှ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု သဘောတရားများကို မိမိတို့၏ လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံများနှင့် ပေါင်းစပ်လျက် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်အထိ တစ်ဦးချင်း တင်ပြခြင်း၊ အုပ်စုလိုက် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင် သင်ကြားမှုပုံစံ မျိုးဖြင့် စာတွေ့လက်တွေ့ ထိရောက်စွာ သင်ကြားပို့ချပေးလျှက် ရှိပါသည်။
MBA ဘွဲ့ရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ဖွဲ့စည်းထားသည့် မြန်မာစီးပွားစီမံအမှုဆောင်များအသင်း Myanmar Business Executives Association (MBE) က တည်ထောင်ထားသော စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းကျောင်း Business Capacity Building (BCB) Centreတွင် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းအပိုင်း(၁) Business Management Module (I) သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းတွင် သင်ကြားပို့ချပေးမည့်ဘာသာရပ်လေးခုမှာ…
စီမံခန့်ခွဲမှုဧ။် အခြေခံမူများကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရှိနိုင်စေရန်။
Accounting Knowledge for Manager
စာရင်းဇယားများကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ နားလည်စေရန်။
မိမိထုတ်ကုန်ကို ဈေးကွက်ခိုင်ခိုင်မာမာ ဖော်ဆောင်နိုင်စေရန်။
လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချနိုင်စေရန်။
သင်တန်းအချိန် : မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီ မှ ၄:၃၀ နာရီ / ညနေ ၅:၀၀ နာရီ မှ ၈:၀၀ နာရီထိ
သင်တန်းရက် : စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ
သင်တန်းကာလ : (၆) ပတ်
စထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သိရှိစေရန်။
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြင့် ဘဝကို ရပ်တည်နိုင်စေရန်။
ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကို ကျွမ်းကျင်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေရန်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်။်
အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအပြင် ဆက်သွယ်ရေးကို ပီပြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်။
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ကျွမ်းကျင်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေရန်။
နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ကိုင် နိုင်စေရန်။
စီးပွားရေးပညာကို အခြေခံမှစ၍ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စေရန်။
သင်ကြားပို့ချရာတွင် Assignments ပေးခြင်း၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ Discussion ပြုလုပ်ခြင်း၊ Marketing Plan နှင့် Business Plan များကို နားလည်သဘောပေါက်စေရန် စနစ်တကျ သင်ကြားပေးပြီး Group အလိုက် Presentation ပြုလုပ်စေခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
သင်ကြားမှုတွင်လည်း ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များကို အတွေ့အကြုံရှိသည့် ဝါရင့်ဆရာ/မများနှင့် အောင်မြင်သော လုပ်ငန်းရှင် ကြီးများက စနစ်တကျ သင်ကြားပေးမှုနှင့်အတူ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကို ဆွေးနွေးဖလှယ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အခက်ခဲများအား ဝိုင်းဝန်းကူညီ ဖြေရှင်းပေးခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ထို့အပြင် သင်တန်းတက်ရောက်နေစဉ်နှင့် သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးသူများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက် နိုင်ရန်နှင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူများ လိုအပ်သော အကူအညီများကို အခမဲ့ကူညီပေးသွားပါမည်။ သင်တန်းကာလတွင်း သင်ကြား ရမည့် ဘာသာရပ်များနှင့် သက်ဆိုင်သော သင်တန်းသားများလေ့လာ ရန်လိုအပ်သည့် Reference စာအုပ်များကို library တွင်ထားရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကာလမှာ (၆ပတ်) ကြာမြင့်မည့်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းချိန်ကို နေ့လည်(၁:၃၀) မှ ညနေ (၄:၃၀)နာရီထိလည်းကောင်း၊ ညနေ (၅:ဝ၀) မှ (၈:ဝ၀) နာရီထိလည်းကောင်း စနေ နှင့်တနင်္ဂနွေများတွင် စီစဉ်ထားပါသည်။ သင်ကြားမှု ထိရောက်စေရန် သင်တန်းသားဦးရေကို ကန့်သတ်ထားပါသည်။
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဖုန်း- ၀၉ ၄၂၀၅၁၆၁၆၅ ၊ ၀၉ ၇၉၅၈၃၄၀၃၈ ၊ ၀၉ ၇၆၃၁၇၃၅၇၀ သို့ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိင်ပါသည်။
Email bcbcentre 009@gmail.com
Wesite : www.bcbcentre.net
MBA ဘွဲ့ရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ဖွဲ့စည်းထားသည့် မြန်မာစီးပွားစီမံအမှုဆောင်များအသင်း Myanmar Business Executives Association (MBE) က တည်ထောင်ထားသော စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းကျောင်း Business Capacity Building (BCB) Centre တွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် အသင်းအဖွဲ့များ၏ အရေးအကြီးဆုံး အရင်းအမြစ် တစ်ခုဖြစ်သည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းကို သင်ကြားပို့ချ ပေးနေပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းတွင် Human Resource Management ၏ ခက်မသုံးဖြာဖြစ်သည့်
အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော ဝန်ထမ်းများကို ဆွဲဆောင်ခြင်း
Development an Effective Workforce
၀န်ထမ်းများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း
၀န်ထမ်းများကို လုပ်ငန်းခွင်မှ စွန့်ခွာမသွားအောင် စည်းရုံးထိန်းသိမ်းခြင်း
တို့ကို အခြေခံမှစ၍ နားလည်စေပြီး Recruitment and Selection, Training and Development, Performance Appraisal, Compensation and Benefits စသည့် ကဏ္ဍများကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်အထိ သင်ကြားပို့ချပေးလျှက် ရှိပါသည်။
သင်တန်းကာလ : (၅) ပတ်
သင်တန်းကာလအတွင်း သင်တန်းသားများ လေ့လာရန်လိုအပ်သော Reference စာအုပ်များကို Mini Library တွင် ထားရှိပေးမည် ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဖုန်း- ၀၉ ၄၂၀၅၁၆၁၆၅ ၊ ၀၉ ၇၉၅၈၃၄၀၃၈ ၊ ၀၉ ၇၆၃၁၇၃၅၇၀ သို့ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိင်ပါသည်။
Website : www.bcbcentre.net , Email : bcbcentre009@gmail.com
MBA ဘွဲ့ရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ဖွဲ့စည်းထားသည့် မြန်မာစီးပွားစီမံအမှုဆောင်များအသင်း Myanmar Business Executives Association (MBE) က တည်ထောင်ထားသော စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းကျောင်း Business Capacity Building (BCB) Centre တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ Sales and Marketing လောကတွင် ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်နေသူများအတွက် မျက်မှောက်ခေတ် Competitive Marketing ကို ထိရောက်စွာ ထိုးဖောက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များဖြင့် သင်ကြားပို့ချပေးလျှက် ရှိပါသည်။
Principles of Sales & Sales Visit
Consumer Behavior & Customer’s Analysis
ဈေးကွက်အနေအထားနှင့် စားသုံးသူများ အပေါ်ဆန်းစစ်ချက်
သင်တန်းကာလ : (၄) ပတ်
Website: www.bcbcentre.net , Email: bcbcentre009@gmail.com
MBA ဘွဲ့ရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ဖွဲ့စည်းထားသည့် မြန်မာစီးပွားစီမံအမှုဆောင်များအသင်း Myanmar Business Executives Association (MBE) က တည်ထောင်ထားသော စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းကျောင်း Business Capacity Building (BCB) Centre တွင် လုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ပြင်ဆင်နေသော ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့ရများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်းများ အတွက် မိမိတို့၏ စွမ်းရည်ကို တည်ဆောက်မြှင့်တင်နိုင်ရန် နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံရှိသော လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွင် အောင်မြင် နေသည့် MBA ဘွဲ့ရ ဆရာ၊ ဆရာမများ ကိုယ်တိုင် စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချပေးလျှက် ရှိပါသည်။
စီးပွားရေးရာ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ကျင့်ဝတ်
အစီရင်ခံတင်ပြမှုနှင့် ဆက်သွယ်မှု စွမ်းရည်
Office System & Procedure
သင်တန်းကာလ : (၂) လ
Essential Skills For Business Professional Course
MBA ဘွဲ့ရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ဖွဲ့စည်းထားသည့် မြန်မာစီးပွားစီမံအမှုဆောင်များအသင်း Myanmar Business Executives Association (MBE) က တည်ထောင်ထားသော စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းကျောင်း Business Capacity Building (BCB) Centre တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အသင်းအဖွဲ့များတွင် ထိရောက်ကျွမ်းကျင်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်မည့် Pofessional အဆင့် ဝန်ထမ်းကောင်း များမွေးထုတ်ပေးရန် နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံရှိသော လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွင်အောင်မြင်နေသည့် MBA ဘွဲ့ရ ဆရာ၊ ဆရာမများ ကိုယ်တိုင် စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချပေးလျှက် ရှိပါသည်။
အဖွဲ့အစည်းအကြောင်း ကောင်းစွာ နားလည် သဘောပေါက်လာစေရန်
Personal Development & Grooming
ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာများကို ကိုင်တွယ်စီမံ ဆောင်ရွက်တတ်စေရန်
စသည့် Module လေးခုကို စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချပေးလျှက် ရှိပါသည်။
MBA ဘွဲ့ရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ဖွဲ့စည်းထားသည့် Myanmar Business Executives Association (MBE) မှ တည်ထောင်ထားသော စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းကျောင်း Business Capacity Building (BCB) Centre တွင်လုပ်ငန်းခွင်၌ အင်္ဂလိပ်စာကို မဖြစ်မနေအသုံးပြုနေသူများနှင့် အင်္ဂလိပ်စာအားနည်းနေသူများအတွက် Intensive Business English Course အား အောက်ပါကဏ္ဍများတွင် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်အထိ နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံရှိသော လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်တွင်အောင်မြင်နေသည့် MBA ဘွဲ့ရ ဆရာ၊ ဆရာမများ ကိုယ်တိုင် စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချပေးလျှက် ရှိပါသည်။
စီးပွားရေးပေးစာ ရေးသားခြင်း မိတ်ဆက်
Business Communication (email, fax, memo, reports)
လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ၊ ရုံးတွင်းစာနှင့် အီးမေးလ်ရေးသားနည်း
Short Phrasese commonly used in email
E-mail တွင်ယေဘုယျ အသုံးပြုသော စကားစုများ
Basic Office vocabulary and acronyms
အခြေခံ ရုံးသုံးဝေါဟာရနှင့် အတိုကောက်စာလုံးများ
တယ်လီဖုန်းပြောရာတွင် လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်
Various idioms/ expressions/ vocabulary/ acronyms related to business
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ဝေါဟာရနှင့် မီဒီယာအသုံးအနှုန်းများ
စီးပွားရေး အင်္ဂလိပ်စာ သဒ္ဒါ
သင်တန်းအချိန် : ၅:၃၀နာရီ မှ ၇:၃၀ နာရီထိ
MBA ဘွဲ့ရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ဖွဲ့စည်းထားသည့် မြန်မာစီးပွားစီမံအမှုဆောင်များအသင်း Myanmar Business Executives Association (MBE) က တည်ထောင်ထားသော စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းကျောင်း Business Capacity Building (BCB) Centre ၌ လုပ်ငန်းခွင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်တွင် ထိရောက်အောင်မြင်စွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် စွမ်းရည်ထူးများ ပိုင်ဆိုင်လိုသူများအတွက် နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံရှိသော လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွင်အောင်မြင်နေသည့် MBA ဘွဲ့ရ ဆရာ၊ ဆရာမများ ကိုယ်တိုင် စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချပေးလျှက် ရှိပါသည်။
Understanding Communication Skill
Forms of Business Communication & Improvement
Culture and Effective Communication Challenges
Cross Culture Communication Strategies
Presentation Skill Practice
MBA ဘွဲ့ရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ဖွဲ့စည်းထားသည့် Myanmar Business Executives Association (MBE)မှ တည်ထောင်ထားသော စီးပွားရေး စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းကျောင်း Business Capacity Building (BCB) Centre တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကုမ္ပဏီများ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင် တတ်စေရန်၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်များကို ဥပဒေနှင့်အညီ ချုပ်ဆိုတတ်စေရန်၊ ပြည်ပပို့ကုန်သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ ငွေပို့ငွေလွှဲများကို တိကျမှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်တတ်စေရန် Doing Business in Line with The Law of Myanmar သင်တန်းကို သင်ကြားပို့ချပေးလျှက် ရှိပါသည်။
Business and Related Business Law In Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေများ
Company Formation, Operation and Liquidation
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်း
Knowledge about Small and Medium Sized Enterprises
အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
Legal Approach to Investment Plicy
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဥပဒေရှုထောင့်မှ ချဉ်းကပ်လေ့လာခြင်း
Business Commercial Contract
အခြေခံစီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ်အကြောင်း စသည့်ကဏ္ဍများကို ဥပဒေနှင့်အညီ တိကျမှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ထိ သင်ကြားပို့ချပေးလျှက် ရှိပါသည်။
BCB မှာ မြှင့်တင်လိုက်ပါ။
Home About us Training Program Resource persons Information News & Events Activities Service Contact us
Copyright@2010 Business Capacity Building Centre. Implemented by Solveware Solution